China Model No: NY Series hydraulic hot spinning fanidiana milina orinasa sy mpamatsy | Miray Top
Model No: NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina
asa：NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina mety indrindra ho an'ny mpanamboatra mpamono afo gazy karbonika na tavoahangy oksizenina
NY Series hydraulic cylinders hot spinning machine have NY-180, NY-219, NY299 the three specifications. NY milina fanidiana mafana mihodinkodina dia afaka manidy tavoahangy oksizenina ranon-javatra, sodina lohan-tsofina, fantsona ary zavatra hafa voahodina ho fisaka bottleneck accumulator. Mety indrindra ho an'ny mpanamboatra mpamono afo. Miaraka amin'ny clamping hydraulic, fihodinana hydraulika, famolavolana tsy manam-paharoa, teknolojia mitarika.
NY Series hydraulic cylinders hot spinning machine dia miasa amin'ny maodely manual sy semi-automatique.
NY Series hydraulic hot spinning fanakatonana milina ho an'ny vy sodina dia seamless sodina fitaovana amin'ny savaivony sy ny halavany, napetraka ao amin'ny lehibe shaft barika. Amin'ny alàlan'ny fanerena ny cylinder hydraulic, manindry, ary avy eo mihodina haingana, ny loha dia mafana amin'ny mari-pana thermoplastic, ary avy eo ny piston cylinder swing dia amboarina mba hanosehana ny rack, mitondra ny fihodinan'ny fitaovam-piadiana, noho ny fihodinan'ny fitaovam-pitaovana, ka ny fanakatonana maty eo amin'ny thermoplastic vy Tube extrusion ho endrika sasany ambonin'ny.
NY Series hydraulic hot spinning fanakatonana milina ny famokarana mahomby dia avo dia avo, mety amin'ny faobe ny famotsorana ny tsindry sambo, toy ny kely sy antonony-habe varingarina mpamono afo, isan-karazany ny tsindry fanaka, boiler fanangonana boaty, sns NY Series hydraulic cylinders mafana spinning milina dia teknolojia vaovao novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy. NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina dia afaka mamonjy be dia be ny vy sy ny angovo, izany no farany an-trano fampiharana ny teknolojia.
NY Series hydraulic hot spinning fanakatonana ny fitsipiky ny fiasan'ny milina
Amin'ny alàlan'ny fanerena ny cylinder hydraulic, manindry, ary avy eo mihodina haingana, ny lohany dia mafana amin'ny mari-pana thermoplastic, ary avy eo ny piston cylinder swing dia amboarina mba hanosehana ny rack, mitondra ny fihodinan'ny fitaovana, noho ny fihodinan'ny fitaovam-pitaovana, ka ny fanakatonana maty eo amin'ny thermoplastic vy Tube extrusion amin'ny endrika sasany ambonin'ny. Ny fahombiazan'ny famokarana NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina dia tena avo, ary mety ho an'ny orinasa izay mamokatra famehezana ny tsindry sambo, boiler fivoriambe boaty sy ny faritra hafa amin'ny be dia be.
MODELY Haingam-pandeha lehibe(r/min) cylinder clamping (KN） Manakatona sy mitoto cylinder(KN) fahefana(KW)
Ny NY Series hydraulic cylinders hot spinning machine dia manome ampahany amin'ny milina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sy ny sisa nandritra ny 10 taona mahery.
Ny modely faran'izay kely indrindra NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina dia azo arovana tsara ao anaty fitoeran-javatra 40 HQ. Raha sambo amin'ny sambo, dia handrakotra ny poncho sy ny Load deck izahay mba hiarovana ny milina fanakatonana mafana hydraulika NY Series.
Jereo NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina amin'ny hetsika!
teo aloha: Baler taratasy fako - Modely No: Fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny famokarana sinoa Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminum Baler Machine ho an'ny Recycling Metal Press - Unite Top
Manaraka: Modely No: Shinoa Manufacture Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Machine
milina fanidiana mafana manodina
Aluminum Foil Baler Machine, Baler baoritra vita an-trano, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Y81 Hydraulic Baler, Leaf Compactor sy Baler, Scrap Metal Compactor,